Phupha nge-Emperor ▷ Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umlawuli idlala indima ebalulekileyo, ngakumbi kwimbali. Amandla, kodwa kunye nobutyebi kunye noxanduva kwaye kwaye zinxulunyaniswa naye. Ngapha koko, abalawuli ababephila nababulawula kwakudala babebaluleke kakhulu kangangokuba sisabazi nanamhlanje. Ekuqaleni, isihloko sikaKaiser sivela kumlawuli waseRoma uKesare. Kwamanye amazwe, umzekelo, i-sultan, i-shah okanye i-caliph ilingana nesikhundla se-Emperor.
Kwakhona, akuqhelekanga ukuba abantu baphuphe bebona umlawuli, bedibana, okanye bengabo. Kodwa angathini la maphupha? Uchazwa njani umlawuli njengomfuziselo wephupha?
1 Uphawu lwephupha «Kaiser» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Kaiser» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uMlawuli» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Kaiser» - ukutolikwa ngokubanzi
Umlawuli uhlala ethembisa izinto ezintle ephupheni. Ukubona into enjalo kuthetha phezulu kubaluleka phambi kwakho. Iphupha liza kuza kungekudala kudumo nembeko kwaye liya kuhlala kwindawo ebalulekileyo. Abanye baya kukuqonda ngempumelelo yakho.
Kukwasebenza kwanjalo kuyo xa uthetha nomlawuli ephupheni. Ngokoluvo ngokubanzi, oku kubonisa ukuba lo mntu kuthethwa ngaye uxatyiswa kakhulu ngabanye abantu kwaye eli gama liya kuhlawula nemali ngokunjalo. Ngale ndlela, amaphupha akufuneki ukuba azikhathaze ngekamva elizayo.
Nabani na ophupha ngokusebenzela umlawuli, oko kukuthi, uqeshwe nguye njengesicaka, unokujonga uphawu lwephupha njengophawu oluqinisekileyo. Amaphupha anjalo ahlala erhoxisa elinye inkxaso umntu onempembelelo. Ukuphupha kuhlala kuxhomekeke kuncedo lwabantu abanamandla kwiimeko zeengxaki.
Amaphupha apho iqela elinomdla lizibona njengomlawuli litolikwa kancinci. Oku kunokuba luphawu lwexesha elizayo ukuphoxeka ukuba. Kuya kufuneka uzame ukungabi nethemba kakhulu malunga neenkalo ezithile zobomi bakho bokwenyani kwaye uhlengahlengise kumaxesha alula.
Ukongeza, amaphupha okuhlangana nomlawuli phesheya nawo athathelwa ingqalelo njengesilumkiso sokuphoxeka: ngokoluvo ngokubanzi, iphupha liza kuhamba kuhambo olude kubomi bakho bokwenyani. Nangona kunjalo, oku akuyi kuba nesiqhamo, Oko kukuthi, iqela elinomdla aliyi kulonwabela okanye landise ulwazi lwabo.
Uphawu lwephupha «Kaiser» - ukutolikwa kwengqondo
Iingcali zengqondo zihlala zijonga ukuba umlawuli uluphawu lwe Padre. Ukuba uKumkanikazi ubonwa ngakuye, esi sibini simele abazali bakhe. Oku kunokuba ngumqondiso wamaphupha. eyakho ingqondo nika kwaye ubonise ukuba zeziphi iipropathi kunye nemiba elawulwayo, okanye ngawaphi amaxabiso aphuphayo ajolise kubomi bemihla ngemihla.
Kwangelo xesha, ngokolu toliko, uphawu lwephupha "uMlawuli" lukwabandakanya isicelo sokungarhoxi kula maxabiso abalulekileyo, kodwa ukuqhubeka nokuwalandela kwaye ungaqubudi.
Uphawu lwephupha «uMlawuli» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, umlawuli umele isimboli ephupheni. Uzuko y Ifama kodwa.